Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlaya badda | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlaya badda
Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlaya badda
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa kulan gaar ah ku yeelanaya magaalada New york ka hor inta uusan halkaasi ka furmin shir madaxeedka guud ee Qaramadda Midoobay waxayna ka wada hadli doonaan xiisadda sii kordhaysa ee la xiriirta xudduud baddeedka sida weyn loogu muran sanyahay ee labada waddan.
Sida ay Xaqiiqa Times xog rasmi ah ku heshay kulankaasi waxaa dalbaday madaxda sare ee Kenya, si xal looga gaadho ismaandhaafka xudduudda baddaha ee imminka jira maadaama maxkamadda cadaaladda caalamka ee loo yaqaano (ICJ) ay markii ugu horreysay dhageysan doonto dacwad ka dhan ah Kenya oo maxkamaddaasi dhawaan loo gudbiyay.
Dhageysiga dacwaddaasi ayaa lagu wadaa inay ka bilaabato maalmaha soo socda xarunta maxkamadda ee magaalada Hague, iyada oo sidoo kalena dawladda Soomaaliya qabsatay garyaqaano ka caawiya sidii ay u difaacan la hayd xudduuddaha baddeed ee ay xaqa u lee dahay.
Goor sii horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in xukuumaddiisu aysan aqbali doonin dadaallada Kenya ay ku dooneyso inay kula wareegto 150km oo ka mid ah marin biyeedka badda Soomaaliya, xitaa haddii buu yiri uu waddanku kusii jiro qalalaase muddo ka badan 20 sanno oo kale.
Waddanka Soomaaliya ayaa xudduud aad u dheer oo dhinaca badda ah la leh Kenya.
Previous articleDaaci oo dawladdu dammaanad ku sii daysay
Next articleMuqdisho: maareeyaha duulista oo la dhaawacay